Ogwe Igwe Igwe Mirror Mirror China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ogwe Igwe Igwe Mirror Mirror - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ogwe Igwe Igwe Mirror Mirror)
Nkịtị Na-ekpo Ekpu maka Ndagharị Njikere Na-ehichapụ Tinye ụdị ị ga-eji eme njem ụtụtụ gị. ClearMirror Dupọ bụ ngwa ngwa ịghọ ezigbo ihe ntancha. Difogger mirror na-agbaso n'azụ mirror na-eme ka ntụgharị ahụ ghara ịdị na - enweghị atụ ọbụna n'ọnọdụ kachasị dị egwu - ezigbo maka ịkpụchapu, wepụ ihe etemeete ma...
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka anwụ na-egbuke egbuke bụ maka ikpo ọkụ na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na ndị na-amphibian. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá...
igwe ikuku cctv dị ala na-arụ ọrụ na-ekpo ọkụ kapton
Ndị na-eme Kapton na-ekpo ọkụ dị iche iche dị iche iche, nha, na nhazi. Polyimide Film na-enye ogo dị elu nke iguzogide chemicals, ma nwee ezigbo ihe ndị na-apụ apụ na gburugburu ebe dị elu. Polyimide bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka ọ dịkwuo elu, na mmanụ na radies....
Igwe okpukpu ọkụ eletrik
Igwe ọkụ na-emepụta eletrik na-eme site na PTC ihe nkiri ọkụ. PTC ihe kpo oku na-ekpo ọkụ bụ ihe igwe ọkụ kpo ọkụ nke na-ejikwa ike oriri na-akpaghị aka site na ịchịkwa nkwụsi ike maka onwe ya n'enweghị thermostat mgbe okpomọkụ nke okpomọkụ ahụ dị iche. Igwe ọkụ ọkụ na-agbanye ọkụ bụ ihe nkwụnye dị mfe ma gaa...
Ememe Ihe Nkiri nke Na-agbanwe Agbanwe maka omenala maka Mirror Anya
P roduct Description A na-eji ihe nkiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi emepe maka ebe a na-ahụ maka ime ụlọ ịwụ, igwe mirror na-arụ ọrụ, ime ụlọ, ụlọ sauna, ụlọ yoga, akpa akwa akwa, uwe, anu ulo, igwefoto, obere ngwa ụlọ na ihe ndị ọzọ. Onye na-ekpo ọkụ dị mfe ịwụnye na dị mfe iji mee ihe. Anyị na-enye gị nkà na ụzụ ọhụrụ nke...
Igwe ọkụ na-ekpuchi ọkụ
Okpokoro ọkụ na-ekpuchi ọkụ na-ekpo ọkụ maka kpala gị, na-azụ ha otú e si ehichapụ. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 8 na X 18 n'ime , ahaziri aha elekere: 24w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max okpomọkụ: 42 ℃ agba: nwa, ahaziri oge ndu: ụbọchị 30 Nkọwapụta ngwaahịa Ngwá ọkụ anyị na-emepụta ihe bụ otu...
Okpokoro Igwe na-ekpo ọkụ nke snow nwere otu bọtịnụ bọtịnụ
Nkọwapụta Ngwaahịa: akpụkpọ ụkwụ mkpịsị aka + azụ nke nkedo atọ nhazi okpomọkụ Ihe: mejupụtara eriri kpo oku ihe, EVA Na-arụ ọrụ oge: elu okpomọkụ 3 awa, ọkara okpomọkụ 5 awa, obere okpomọkụ 8 awa Na-arụ ọrụ okpomọkụ: H50 ℃, M45 ℃, L38 ℃ Oge na-enye oge: 4-5H Voltage ọrụ: 3.7V 4500mAh Li-ion Batrị Enwere ike iweghachi...
Ogwe Igwe Igwe Mirror Mirror Defogger Mirror Mirror Ogwe Igwe Igwe Maka Igwe Egwu Ogwurugwu Igwe Igwe Predichara Obere Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe igwefoto Cctv Egwuregwu Egwuregwu Igwe Mmiri nke Snowthrower Okpukpe Mirror Demister Nkume Igwe Ọkụ Mmiri